Dejan Lovren oo fariin culus u diray kooxda Manchester City kahor kulanka caawa ka dhici doona Etihad Stadium – Gool FM
Dejan Lovren oo fariin culus u diray kooxda Manchester City kahor kulanka caawa ka dhici doona Etihad Stadium
Dajiye January 3, 2019
(Liverpool) 03 Jan 2018. Difaaca kooxda Liverpool ee Dejan Lovren aya wuxuu ka hadlay kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan dhigooda Manchester City horyaalka Premier League.
Dejan Lovren ayaa kahor kulankan wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Liverpool wuxuu ku sheegay:
“Iyagu waa Manchester City, waxaana u heynaa ixtiraam oo dhan, gaar ahaan wixii ay ku gaareen sannadkii hore, waxay jabiyeen dhibco rikooro ah, taasoo ay aad ugu adagtahay in la sameeyo horyaalka Premier League”.
“Wuxuu noqon doonaa kulankan caqabad weyn ee nagu hor gudban, lakiin diyaar ayaan u nahay, marar badan ayaan is wajahnay sanadkii hore, si fiican ayay inoo garanayaan anaga sidoo kale waan naqaanaa, sidaas darteed kulanka wuxuu noqon doonaa mid muhiim ah ee daawadashiidana lagu raaxeysan doono, bal aan aragno kooxda guuleysan doonta”.
“Waxaan nahay koox marwalba dooneysa in ay badiso, miyay suurtogal tahay inaan guuleysano?” Haddii aan ku jirno qaab ciyaareedkan saxda ah, dabeecada saxda ah ee iskudhafan, qeyb kasta ee ka mid ah gudaha garoonka, isla markaana aan siifan u difaacano”.
“Wax walba oo aad sameyso waxaad u baahan tahay inaad nasiib hesho, laakiin Manchester City ma naga hor istaagi doonto seddexda dhibcood, si walbaba wuxuu noqon doon kulan weyn ee dhex mari doona labada kooxood”.
SAWIRRO: Liverpool oo Baskeedii Gaduudnaa soo dhigatay Manchester...(Toloow kulanka Caawa BASKA maku horjari doonaan Goolka??)
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Manchester City Vs Liverpool